नयाँ राजनीतिको जग बसाल्न नेतृत्व लिन मेरो उम्मेदवारी « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
प्रकाशित मिति : २०७९, २० जेष्ठ शुक्रबार २२:१८
काठमाडौं । इनफ इज इनफका अभियन्ता पुकार बमले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
शुक्रबार बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणा गर्दै अहिलेसम्म सडकबाट नागरिकका निम्ति सकेको काम गरेको र अब संसद्मा पुगेर नागरिकका आवाज बोल्न उमेदवारी दिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय निर्वाचनमा देशका केही मुख्य सहरहरूमा पालिककाको नेतृत्वमा सक्षम र युवा उमेदवारलाई स्थापित गरेजस्तै संघीय संसद्मा समेत सक्षम युवाहरूलाई पुर्याउनुपर्नेछ ।’
काठमाडौँ क्षेत्र नं १ मा उम्मेदवारी घोषणा:
अहिलेसम्म सडकबाट नागरिकका निम्ति सकेको काम गरेँ, अब संसद् पुगेर नागरिकको आवाज बोल्छु
नमस्कार, म पुकार बम।
मैले मेरो किशोरावस्थादेखि पछिल्लो १७ वर्ष सामाजिक र राजनीतिक अभियानमार्फत सङ्घर्ष गरी रहेँ। अध्ययनका हिसाबले म Social Work मा Ph.D. गर्दै छु। मैले Sociology / Anthropology र Political Science दुई विषयमा स्नातकोत्तर गरेको छु। पेसाले म लेक्चरर हुँ।
विगत दुई दशकका राजनीतिक उथलपुथललाई नजिकबाट नियाल्दै गर्दा, आफ्नै अगाडी बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भएको देखियो, तर नागरिकको अवस्था परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिएन। लोकतन्त्रको नाउँमा नेताहरूले लुटतन्त्र मचाइनै रहे।
अब अति भयो। Enough is Enough.
लुटतन्त्र विरुद्ध निर्णायक लडाई लड्न मुलुकभर आम युवा साथीहरूलाई समेत अपिल गर्दै यही वर्ष सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं १ ( काठमाडौँ वडा न. १०, ११, २९, ३१ ) बाट मेरो उम्मेदवारी रहने घोषणा गर्दछु।
लामो सङ्घर्ष पछि प्राप्त लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई संविधानमार्फत संस्थागत गरिसकेपछि अब नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने नयाँ राजनीति नागरिकहरूको चाहना हो। हाम्रो राजनीति पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीति हो।
अब मुलुकको नीति बनाउने थलो संसद्ले समेत नयाँ अनुहार खोजेको छ, ताजगी खोजेको छ। त्यसैले, राजनीतिक भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र विरुद्ध युवा प्रतिरोधको आवाज संसद्मा पुग्न जरुरी छ। यसैको पहलस्वरुप मेरो उम्मेदवारी हो।
आफ्नो योग्यता, क्षमता, अहिलेसम्म गरेको राजनैतिक – सामाजिक कार्यहरूलाई साक्षी राख्दै काठमाडौँ क्षेत्र न १. का सचेत र परिवर्तनप्रेमी नागरिकहरू समक्ष म मेरो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै छु।
म काठमाडौँकै मतदाता हुँ। विद्रोह र भद्र प्रतिरोध मेरो स्वभाव हो। कलेज पढ्दै गर्दा, परीक्षा नहुँदा कलेज प्रशासनलाई प्रश्न गरेँ। आफै पढेको कलेजहरूका वेथितीविरुद्ध शान्तिपूर्ण अभियान चलाएँ। दोस्रो जनआन्दोलन पछिको परिवर्तनको घ्रषणले तरल भएको राष्ट्रिय एकता पुनः स्थापित गर्न ‘नेपाल युनाइट्स’ अभियानको नेतृत्वदायी भुमिकामा रही काम गरें।
२०६९ माघमा सुरु गरिएको महिला हकहितको पक्षमा र हिंसाविरुद्ध कानुन बनाउन १०० दिन भन्दा बढी ‘अकुपाइ बालुवाटार’ अभियानमा आन्दोलनको नेतृत्वदायी भुमिकामा रही सक्रिय भएँ। डा. गोविन्द केसीको पहिलो सत्याग्रहदेखि नै अग्रपंङ्तीमा रही नेतृत्वदायी भूमिकामा निरन्तर सहभागी भएँ।
नेपाल खुल्ला छ, ‘नेताज्यू खबरदार , संविधान कहिले?’ जस्ता दर्जनौँ रचनात्मक प्रतिरोधका राजनीतिक अभियान हुँदै स्व. उज्वल थापासँग मिलेर २०६९ को साउनमा विवेकशील नेपाली दलको स्थापना गर्न नेतृत्व लिएँ।
२०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्पमा विवेकशील नेपालीमार्फत देशैभर राहत वितरण र उद्धार, कोरोना कहरको पहिलो र दोस्रो लकडाउन बिच ‘हाम्रो सानो प्रयास’को संयोजक भएर ५०० दिन बढी नि:शुल्क खाना खुवाउने, ५०० भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर र कन्सेन्ट्रेटर व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक अभियानको नेतृत्व गरेँ।
२०७७ सालमा मेरो जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड आयो। राजनीतिलाई समेत समाजसेवाको माध्यम बनाएर काम गरिरहँदा नागरिकका पीडामा राज्यको रवैया निर्दयी र निर्मम भएको देख्न नसकेर #EnoughIsEnough अभियानमार्फत साथी ई: सँग १२ दिन सत्याग्रह (पानी र खाना बिनाको आमरण अनशनमा) बसेँ। मृत्युसँग लड्दै नागरिकका पीडालाई खबरदारीमार्फत सत्तासम्म पुर्‍याइरहँदा प्रत्येक पल मेरो आँखामा मेरी आमा र दिदिबहिनीहरु आउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला कोरोनाबाट नागरिकको ज्यान जोगाउन पहल लेउ भन्ने सामान्य प्रश्नका लागि पनि आमरण अनशन बस्नुपरेको थियो।
युवा साथीहरू, काठमाडौँ क्षेत्र नं १ का मतदाता महानुभावहरू,
अब नागरिकका यी प्रश्न सोध्ने स्थान बदल्न चाहन्छु। म सडकबाट मात्र होइन सदनबाट नागरिकलाई साथ दिन चाहन्छु। सडकमा १७ वर्ष सङ्घर्ष गरेर अब सदनमा पुगेर सदनलाई नागरिकहरूको आवाज सुनिने थलो बनाउन चाहन्छु। म सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आ-आफ्नो ठाउँबाट लुटतन्त्रको प्रतिरोध गर्न युवाहरूलाई उम्मेदवारी दिन र नयाँ राजनीतिको जग बसाल्न नेतृत्व लिन पनि अपिल गर्दछु।
भर्खरैको स्थानीय निर्वाचनमा देशका केही मुख्य सहरहरूमा पालिकाको नेतृत्वमा सक्षम र युवा उम्मेदवारलाई स्थापित गरेजस्तै सङ्घीय संसद्मा समेत सक्षम युवाहरूलाई स्थापित पुर्‍याउनुपर्नेछ। देशैभरिबाट सक्षम नेतृत्वले उम्मेदवारी दाबी गर्ने लहर काठमाडौँ क्षेत्र नं १ को यो हाम्रो उम्मेदवारीको एउटा झिल्कोबाट सुरु हुने र यसले नयाँ सम्भावना स्थापित गर्ने हाम्रो विश्वास छ।
उज्वल भविष्यका निम्ति हामी सबैलाई शुभकामना।